Kuunza Mota Kubva kuUSA kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Imba uye Nyoresa Mota Yako MuUK TINOSHANDA NEZVIMOTO ZVINOBVA MUNYIKA DZOSE Yedu yega IVA yekuyedza nzira KUMASHURE KUNYANYA KUKOSHA KWEKUEDZESA NOKUNYORESA MUUK End Kugumisa Service Kubva pakutora kumusoro kusvika kuzere UK Kunyoresa, TINOBATA ZVESE ZVAKAITWA 30 Makore Ekuziva KUZIVA, UNOGONA UYE UNOGONESA 6000+ Cars Dzakatumirwa Kunze Kubva kuSUPERCAR KUSVIRA SUPERMINI - TIRI NYANZVI!
Uri kutarisa kuendesa mota kubva kuUSA kuenda kuUnited Kingdom?
Isu tinobata maitiro ese ekupinza mota kubva kuUSA, kusanganisira inland trucking, export, shipping, custom clearance, UK inland trucking, magetsi kutendeuka, kuyedza kutevedzera uye kunyoreswa kweDVLA. Isu tinobata maitiro ese, tichikuchengetera iwe nguva, dzichikunetsa uye zvisingafanoonekwe mitengo.
Vamiriri vedu vekuUS, vatakaita mubatanidzwa wakasimba kwazvo, vacharonga kuunganidzwa kwemotokari yako kubva kukero yako kana kero yemunhu wawakatenga kubva mukati memazuva mashoma ekubhuka.
Munguva yekufamba chero kwemotokari yako, inishuwarenzi maererano nemitemo nemamiriro edu. Kana iwe uine chero mibvunzo usazeze kupinda mukutaurirana, asi isu tinofambisa zviuru zvemota gore rega rega pasina nyaya saka ndokumbira usimbise chokwadi chekuti tapedza nguva yakareba tichitsvaga vakavimbika vanehukama.
mota Kuisa & Shipment
Mushure mekuuya kwemotokari yako kudepoti yedu, isu tinozozoisa mumudziyo wayo wekutakura nehanya zvakanyanya uye nekutarisisa. Vamiririri vedu vari pasi muUSA vakasarudzwa nekuda kweruzivo rwavo uye kutarisisa kune zvakadzama pakubata nemotokari.
Kana iwe ukashuvira kuenderera mberi nekuvimbiswa, isu tinopa marine inishuwarenzi iyo inovhara mota yako kusvika kune yakazara izere yekutsiva kukosha. Mune ruzivo rwedu, hatina kumbove nenyaya dzakakonzera kurasikirwa kwevatengi nemotokari.
Kutumirwa kwemotokari kunogona kutyisa, kunyanya kubva kuAmerica. NeWest Coast inogona kutora nguva yakati rebei kupfuura iyo East Coast uye tinonzwisisa kuti panguva ino ungangoda kuziva kuti yakachengeteka kuburikidza nemasuwo echiteshi, akajekeswa kuburikidza netsika, uye pamwe munzira yekuenda kwedu nzvimbo.
Kana imwe mota yako yabuda mumaoko ako inishuwarenzi kunyange iri kunze kwemvura nemakambani ekugadzirisa zvinhu. Saka urwu zvakare rwakawedzerwa rugare rwepfungwa rwatinotarisira kuti runokubatsira kuti unzwe kusununguka kupa makiyi emotokari yako yekuAmerica.
Paunenge uchipinza mota kubva kuAmerica kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero wakasununguka kana uine mota kwemwedzi mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemaviri.
Mota zhinji dzinopfuura makore makumi matatu ekuberekwa dzinokodzera 30% kupinza VAT uye hapana basa kana ichitumirwa kunze, zvichipa vasina kunge vakachinjwa zvakanyanya kubva mukushandisa kwavo kwekutanga uye havana kuitirwa mutyairi wezuva nezuva.
Kuedzwa uye Kugadziriswa
Paunosvika kuUK, mota yako ichave inoenderana nemiedzo yakati wandei nekugadziridzwa kuitira kuti ive nechokwadi chekuti inosvika kuUK highway zviyero.
Kugadziriswa kunonyanya kusanganisira kugadziridzwa kuchiratidzo, mhute uye mwenje yekupwanya pamotokari. Mota dzakagadzirwa neUS dzinowanzo kuve nezviratidzo zvakasiyana zvemavara, izvo zvinowanzobatanidzwa mumabhureki emagetsi mabhureki. Ivo zvakare vane akasiyana mavara emarambi emarambi uye mota dzinogara dzisina zviratidzo zvemativi kana mwenje yemwenje.
Isu tinoshandura mota yako kuUK zviyero tichishandisa yazvino-mumba LED mwenje tekinoroji, zvichitibvumidza kupedzisa shanduko dzese nediki diki yekushongedza kukanganisa nevane hunyanzvi vanokodzera.
mota dzinotorwa kubva kuU.SA dziri pasi pemakore gumi dzichazoda kuongororwa yeIVA iyo DVLA isati yabvumidza kunyoresa kwako. Seyo yega kambani muUK ine yakavanzika inoshanda IVA yekuyedza nzira yemotokari dzevatakurwi iyo inogamuchirwa neDVSA. Iyo nguva inotora kupedzisa ichi chimiro chekupinza inokurumidza zvakanyanya sezvo mota yako isingatombodi kusiya saiti yedu uye isu hatisi pasi pehurumende nguva dzekumirira.
Chiyedzo cheIVA hachifanirwe kumotokari dzinopfuura makore gumi, zvisinei hazvo chinofanirwa kupasa MOT saka chinofanirwa kunge chakakodzera mumigwagwa maererano nemarambi emasaini, kupfeka matai, kumisa uye mabhureki, ayo atinozotarisa, kuti ave yakakodzera kuendeswa mumigwagwa yeUK.
Takabudirira kukumbira vatengi vedu kuti vakwanise kuwana yedu pachedu Yangu Mota Kunze yakatarwa DVLA Account Manager, zvichireva kuti mushure mekupasa kuyedza kunyoresa kwako kunogona kubvumidzwa nekukurumidza kupfuura kumwe kunhu.
Isu tinobva takwanira yako nyowani UK manhamba mahwendefa uye toita mota kugadzirira kungave kuunganidzwa kana kuendeswa kunzvimbo yaunofarira.
Zvinodhura zvakadii kupinza mota kubva kuUSA kuenda kuUK?
Kuedzwa kupinza mota yako asi uchida zano rekuti ichadhura zvakadii?
Kana iwe usina chokwadi nezvekuti zvakadii kudhara kupinza mota yako kubva kuUSA kuenda kuUnited Kingdom saka tinogona kupa kotesheni yemota yako inovhara zvese kubva kuunganidzwa kusvika kunyoreswa muUnited Kingdom.
Nekudaro, kana iwe uchingotsvaga zano rakaomarara rezvingangodhura ipapo zera remotokari rinotamba chikamu chakakura mumutengo wekupinza. Kunze mutero ndiko kuverenga kwekutanga iwe kwaunofanirwa kuita izvo zvinokubatsira iwe kuona mutengo wemutengo wakazara wemotokari paunosvika muUnited Kingdom.
Kazhinji kutaura, mutengo wekushandura mota unowanzo kuve mukuru mota nyowani kunyanya idzo dzinowira pasi pemakore gumi ekuberekwa. Kunyange hazvo, isiri mota dzese dzinobva kuUSA dzakafanana.
Takatumira zvinhu zvese kubva kuFord mustang yechinyakare kuenda kune nyowani nyowani yemutsetse marori akagadziridzwa uye mota dzese dzinoda chirongwa chakasarudzika chekuona kutevedza mukati meUnited Kingdom.
Kana iwe uchida ratidziro yakajeka uye ine udzamu inotsanangura maitiro ekupinza mota yako kubva kuUSA usazeze kupinda mukutaurirana.
Une mubvunzo pamusoro pekunze mota kubva kuAmerica kuenda kuUnited Kingdom?
Unogona here kubatsira nezvakanaka mota kupinza kunze kwenyika kana mota dzinobva kuAmerica idzo dzatove muUnited Kingdom?
Ndizvozvo. Isu tinoshanda nenhamba dzinoverengeka dzemotokari uye kune yakawanda ruzhinji rwemotokari idzo dzatove muUnited Kingdom, tinogona kubatsira.
Zvichienderana nemotokari yako tinozochinja mazwi edu zvinoenderana nekuti nzira yekunyoresa ndeyei.
Unogona here kubatsira nekushandurwa kwemwenje kweAmerica?
Ndizvozvo. Takashanda nemamota asingaverengeke eAmerica uye tinogona kupa yakafanana-ye-senge yekugadzira-chikamu kupedzisa.
Isu tinonzwisisa kuti kwakawanda kwekukwikwidza kunouya kubva kune iwo mahombe makuru anoteedzana. Ndicho chikonzero nei mota zhinji tichizopa yakanyanya bespoke maitiro.
Chokwadi ndechekuti, hapana mota mbiri dzakafanana. Isu tinoshandura mota kuti dzichengete iwo maratidziro uye manzwiro asiwo kuvaita iwo emigwagwa zviri pamutemo.
Isu takagadzira nzira dzakawanda dzakasiyana idzo mune dzimwe nguva dzakasarudzika kwatiri. Semuenzaniso, mamwe makambani achasarudza kupaza mamodule ekuvhenekesa paanokwanisa kushandura zviratidzo zvako kuita amber. Ichi chimwe chinhu chatinoita mumamiriro ezvinhu akaipisisa, asi mota zhinji dzinogona kugadziridzwa neyakafanana neyakafanana pasina kukuvadza kutendeseka kwemayuniti ekuvhenekesa mota.
Unogona here kubatsira nekutenga mudhudhudhu kubva kuAmerica?
Takashanda nemota dzakasiyana siyana kubva kuAmerica uye midhudhudhu hazvisi izvo. Kune mienzaniso mizhinji kwazvo inonakidza yemidhudhudhu inouya kubva kuAmerica (kunyangwe ichigara iri yaHarley) tinogona kunzwisisa kuti sei dzimwe nguva varidzi vachizvitengesa
Zvemidhudhudhu, isu tinoshanda nevamwe vevanotyaira mudhudhudhu muindasitiri kuona kuti hapana nyaya.
Iwe unopa rairo here paKutamisa kweResidency kunyorera?
Kana iwe uri kufamba uchibva kuAmerica uchienda kuUnited Kingdom saka unogona kunge uri kushandisa chirongwa chekuyamura cheToR kuunza zvinhu zvako newe kuUK. Ipo isu tisingakwanise kuzadza fomu rako ToR1, isu tinogona kupa rubatsiro kune chero mibvunzo yaunayo.
Isu tinobatsira vatengi vanoverengeka gore rega kubva kuUnited States kuenda kuUK.
Ndokumbira utarise kuti kana iwe uchida kushandisa mota yako senzira yekutakura zvinhu zvako isu tinotonyanya kufara kuti iwe udaro. Isu tinonzwisisa kuti urikuda kushandisa zvakanyanya iyo nzvimbo kana uchibhadhara zvekutumira uye iwe unogona kusevha mari yakawanda kwazvo nekuita kudaro.
Iwe unopa basa rekutenga remotokari dzeAmerica?
Kana paine mota yekunakidzwa iwe yausati watenga zvakadaro - usanonoka kupinda mukutaurirana.
Nemakore eruzivo rwekutenga mota kunze kwenyika, tinogona kupa nhungamiro isina rusaruro pane izvi uye titore kuunzwa kwemota iwe uchinge watenga iyo.
Isu tinogona zvakare kubatsira mune dzimwe nguva nemotokari dzekutsvaga dzinogona kunge dzakaoma kuwana kana kuwana. Ndokumbira utarise kuti iyi haisi sevhisi yatinopa kune dzese mota uye inoitirwa vatengi zvakakomba chete.
Unogona here kubatsira nekubhadhara mota muAmerica?
Kana usati watenga mota yauri kuda kupinza - unototangira kupi.
Tora nguva kuti kana mota iri yechokwadi here kana kwete. Zvakakosha kushanda nevatengesi vanoita hunyanzvi uye vane mukurumbira wakanaka mukutengesa mota. Nekudaro, kana iwe uchitova muAmerica uye urikutenga nekukosha kumeso, ipapo unogona kuve wakasununguka zvakanyanya neiye anotengwa nemota kubva. Asi kana iwe uri kutenga mota kubva mhiri kwemakungwa? Shandisa mutengesi anovimbika wemotokari.
Tarisa pamusoro pemotokari uye usatya kuongorora zvakanaka zvese zvacho. Usanzwe uchimanikidzwa kuti utenge ipapo uye ipapo - sezvo panogona kuve nenhoroondo yekukuvara kumotokari iyo inogona kukubata iwe. Paunenge uchinge wagutsikana nemota yeAmerican - zvinogona kuve zvinonyengera kuwana yakanakisa mutengo nekuda kwekuchinja mukuchinjana kwemitengo. Zvekutenga kwemazuva ese, zvinogona kuita mutsauko mudiki kune iyo yakazara huwandu asi zvine chekuita nekutenga kukuru kwemari? Unogona kuva mutsauko mukuru. Kune makambani mazhinji anoita sevatengesi ayo anowanzo kupa anonzwisisika uye pamusoro pemari yekutsinhana yemusika pane kutaura, yako yepamusoro mumugwagwa kubhengi.
Usanonoka kupinda mukutaurirana nezvekutenga mota.
Tinogona kubatsira nechero ipi yekugadzirisa kana basa rekugadzirisa
Zvichienderana nezera remotokari yako panogona kuve nekugadzirisa basa rinodiwa kuti uigadzirire migwagwa uye yakachengeteka.
Isu tinopa bespoke sevhisi. Makanika edu aripo uye anogona kubatsira nekutendeuka, kugadzirisa basa, uye chero zvikumbiro zvakakosha zvaungave nazvo.
Kunyangwe iri Corvette yechinyakare inoda kudzoreredzwa kuzere kana Mustang inoda mitsara mitsva yekumhara inokodzera.
Isu tinogara tichida kufunga kuti inguva huru yekutora mukana wekushaya mota yako - nepo ichi iinesu, unogona kuita chero basa ringaitwe raungade kuita usati watora mota.
Saka usazeze kupinda mukubata nechero zvakakosha zvinodiwa
Tinogona here kubatsira kupinza mota dzakasiyana?
Hatizive kana zvichitiita kambani inotyisa kwazvo yekupinza mota kwese, asi takambounza bhazi rechikoro. Iwo haakwane mumidziyo yekutumira kuti iwe uzive.
Saka hongu, tinogona kubatsira kuunza mota dzakasiyana siyana kuUnited Kingdom kwauri.
Takashanda nemazana emota dzeAmerica
Kutangira pamitengo yakasarudzika kusvika kuzvigadzirwa zvemazuva ano
Vatengi vedu vakativimba nemhando nyowani dzemhasuru mota kune imwe yemhando mota dzakadai seFord Raptor. Asi isu hatisi kungobata chete nemotokari dzazvino, uye isu zvakare tinoita dzinoverengeka dzekare mota kupinza kunze kwenyika mwedzi wega kubva kune vatengi vari kuda kutora mukana weakanakisa mutero mabhureki anowanikwa kumamota ekare padivi pemitemo mitsva yekuregererwa yeMOT inoita kunyoresa yeAmerican classic yakapusa.
Saka kunyangwe yekare kana nyowani, usazeze kupinda mukutaurirana.